वीर्य निस्काशनको आवृत्ति र क्यान्सरबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न रिडर र उनका सहकर्मीले सहभागीलाई उनीहरुको यौन स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्ड तथा ल्याब परीक्षणबारे विभिन्न प्रश्नको जबाफ दिन लगाएका थिए ।
अध्ययन अनुसार महिनामा तीन पटकसम्म वीर्य फाल्ने पुरुषमध्ये १ सय ९२ लाई सो क्यान्सर भएको पाइएको थियो । सहभागीमध्ये १ हजार ४२ ले महिनामा ४ देखि ७ पटक वीर्य फाल्ने र १५ सय ९ जनाले ८ देखि १२ दिन फाल्ने बताएका थिए । त्यस्तै ८०७ जनाले १३ देखि २० पटक फाल्ने बताएका थिए । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४२०:२७
चुम्बनबाट हुने खतराबारे जानीराखौ !
जाडोमा ९० प्रतिशत मानिस गर्छन् यी ५ गल्ती, जुन बिल्कुलै गर्नु हुँदैन
हस्तमैथुनले के-कस्तो असर पार्ला ? के हस्तमैथुनले मानिसलाई कमजोर बनाएको हो ?
सुहागरातमा यी ३ चीज झुक्किएर पनि नखानुहोस् ! विवाह नभएकाले जानी राख्नुस् यी कुरा !
डण्डीफोर निचोर्दा झुक्किएर पनि नगर्नुस् यी गल्ति, मुखभरि दाग बसेर हुनेछ अनुहार हेर्न नहुने!
खानपानले मात्र होइन, यसकारण विवाहपछि बढ्छ तौल! जानिराखौ…